के स्थानीय तहको नेतृत्व युवामा जान लागेको हो ? – Main Batti
के स्थानीय तहको नेतृत्व युवामा जान लागेको हो ?
प्रकाशित मिति : २५ बैशाख २०७९, आईतवार १२:२४
वैशाख ३० गते हुने स्थानीत तह निर्वाचनमा युवाहरुले उत्साहजनक रुपमा उम्मेदवारी दिएको पाइएको छ ।
निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कले निर्वाचनपछि ठूलो संख्यामा युवाहरु स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्ने स्पष्ट देखाएको छ ।
नयाँ मतदातालाई जीवनको पहिलो मतदान सूर्यमा गर्न ओलीको आग्रह